ပိုင်ဆိုင်မှုအကာအကွယ်ပေးခြင်း Trust မှ - ကဘာလဲ? ဒါကဘယ်လိုမျိုးအလုပ်လုပ်သလဲ?
ပိုင်ဆိုင်မှုအကာအကွယ်ပေးခြင်း Trust မှ
ယုံကြည်မှုသုံးပါတီများအကြားတစ်ဦးစာဖြင့်ရေးသားသဘောတူညီချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဦးစွာပုံမှန်အားဖြင့်ယုံကြည်မှုကိုသို့သူသို့မဟုတ်သူမ၏ပိုင်ဆိုင်မှုကိုထည့်လေ့မရှိသူကို (လည်း Grantor ခေါ်) တစ်ဦး Settlor ဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယအချက်မှာယုံကြည်မှုကိုပိုင်ဆိုင်မှုများကိုစီမံခန့်ခွဲသူယုံကြည်အပ်နှံခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ တတိယအချက်ယုံကြည်မှုကို၏အကျိုးကျေးဇူးများအားလက်ခံတွေ့ဆုံသူအကျိုးခံစားသည်။
တစ်ဦးအတွက် ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုယုံကြည်မှုအဆိုပါ Settlor နှင့်အကျိုးခံစားအတူတူပင်လူတစ်ဦးရှိနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ Trustee ပုံမှန်အားအကြွေးကနေပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကာကွယ်ပေးရန်စာဖြင့်ရေးသားတာဝန်ရှိပါတယ်တဲ့လိုင်စင်ရ, ကပ်လျက်တည်ရှိ, အာမခံကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
အများဆုံးကာကွယ်မှုပေးပြသပြီယုံကြည်မှုဟာဂေါပကအဆိုပါတရားစွဲဆိုမှုရာအရပ်ကိုကြာရှိရာတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ပြင်ပတွင်နေထိုင်ဘယ်မှာရှိသူများဖြစ်ကြသည်။ အမှုဥပဒေနှင့်အတွေ့အကြုံ, ထိုအရ အကောင်းဆုံးတရားစီရင်ပိုင်ခွင့် အဆိုပါကွတ်ကျွန်းစုများဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကိုယ်နှိုက်ကအင်အားအကောင်းဆုံးနှင့်အများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချပြသခဲ့သည်ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကတခြားဒေသများတွင်တွေထက်ပိုပြီးကွတ်ကျွန်းစုများပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုကိုး စား. တည်ထောင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါကွတ်ကျွန်းစုတောင်ဘက်ဟာဝိုင်ယီ၏တည်ရှိသည်။
ထိုကဲ့သို့သောယုံကြည်မှုထူထောင်သောအခါ, ယုံကြည်မှု၏အတွင်းပိုင်းတစ်ဦးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကန့်သတ်တာဝန်ယူမှုကိုကုမ္ပဏီ (LLC) နေရာသမ္မာသတိရှိသောဖြစ်ပါတယ်။ ယုံကြည်မှုကို LLC သည်၏ 100% ပိုင်ဆိုင်သည်။ LLC သည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ခိုင်မာတဲ့ LLC ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးပြဌာန်းချက်၏ဥပမာ, နေးဗစ်၏ကာရစ်ဘီယံကျွန်း၌တည်စေနိုင်သည်။ အဆိုပါဘဏ်အကောင့် LLC သည်နာမ၌ကငျြးပခဲ့ပါလိမ့်မည်။ အဆိုပါ client ကိုစပိုင်းတွင် LLC သည်၏မန်နေဂျာနှင့်ဘဏ်အကောင့်ပေါ်တွင်လက်မှတ်ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးတရားစွဲဆိုမှုစဉ်အတွင်းပိုင်ဆိုင်မှုအကာအကွယ်ပေးခြင်း Trust မှ
က "မကောင်းတဲ့အရာ" ဖြစ်ပျက်နှင့်သင့်ဥပဒေရေးရာရန်သူများကိုပိုက်ဆံယူမယ်လို့သောအခါ, ဂေါပက LLC သည်၏မန်နေဂျာအဖြစ်အဆင့်နှင့်ဖမ်းဆီးရမိမှသင်၏ဘဏ်အကောင့်ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ LLC သည်၏မန်နေဂျာကုမ္ပဏီနှင့်မပိုင်ဆိုင်မှုအနေအထားအတွက်အခန်းကဏ္ဍကိုယ်စားပြုကတည်းကလိမ်လည် transfer သို့မဟုတ်ပိုင်ဆိုင်မှုအငြင်းအခုံ၏လိမ်လည်မှုအဆင်ပြေပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး။
ကျနော်တို့ယုံကြည်မှုအတွက် "duress အပိုဒ်" ထားပါ။ သင့်ရဲ့ဥပဒေရေးရာပြိုင်ဘက်ငွေကိုပြန်ပို့မည့်အမှုမှာအသငျသညျအမိန့်မှတရားသူကြီးရရှိသွားတဲ့။ ဒါကြောင့်သင်ကတရားရုံးယုံကြည်မှုကိုရန်ပုံငွေများတရားရုံးကူးလှည့်စေခြင်းတောင်းဆိုရန်သငျသညျအမိန့်ထုတ်ထားပြီးသူ့ကိုပြောပြအဆိုပါဂေါပကမှစာတစ်စောင်ရေးသားနေဖြင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။ ဒီအစာ duress အပိုဒ်အစပျိုးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါဂေါပကသင် duress အောက်မှာသရုပ်ဆောင်နှင့်မလိုလိုလားလားဖြစ်ကြောင်းမြင်ရပါလိမ့်မည်, သင်၏ပြိုင်ဘက်ရန်ကျော်ရန်ပုံငွေများကိုဖွင့်မရပါလိမ့်မယ်။
ပညတ္တိကျမ်းတရားသူကြီးတစ်ဦးမထီမဲ့မြင်၌သင်တို့ကိုကိုင်ဖို့ခွင့်ပြုမထားဘူး။ ဤတွင်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ရဲ့သင်သည်သင်၏ပေးသောနေ့၌တရားသူကြီးများ၏ရှေ့မှောက်၌ပြန်ဆွဲထုတ်ခြင်းနှင့်သူ့ကိုဖြစ်ပျက်ကိုသိပြောပြမိန့်ထုတ်နေကြသည်ဆိုပါစို့။ သူကခုံတန်းလျား POUNDS နှငျ့သငျကျောယုံကြည်မှုကိုထံမှရန်ပုံငွေများလိုက်နာနှင့်ယူဆောင်လာကြဘူးဘာကြောင့်မေးတယ်။ သငျသညျသူ့ကိုစာတစ်စောင်ပေးပို့ဖို့အသုံးပြုတဲ့ FedEx ခြေရာခံခြင်းအရေအတွက်ကိုနှင့်အတူရန်ပုံငွေပြန်ပို့တောင်းခံသောစာကိုပြသပါ။ ဆနျ့ကငျြရှေ့နေမထီမဲ့မြင်၌သင်တို့ကိုကိုင်ဖို့တရားသူကြီးကမေးတယ်။ သငျသညျ "ခဏတစ်သင်သည်ဂုဏ်ပြုအပေါ်ဟန်ထူးကပြောပါတယ်။ သငျသညျမထီမဲ့အတွက်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိုင်ထားနိုင်မီလိုအပ်သောဖြစ်ကြောင်းသိသာထင်ရှားသက်သေအထောက်အထားသုံးခုကိုအပိုင်းပိုင်းရှိပါတယ်။
ပထမဦးစွာပေးသနားတျောမူအပျသညျဟုအမိန့်ရှိပါရှိရပါမည်။ တဦးတည်းရှိခဲ့သည်။ ဒုတိယ, contemptor အမိန့်နှင့်ပတ်သက်ပြီးသိကျွမ်းရမည်ဖြစ်သည်။ အဲဒါက ... ဖြစ်တယ်။ ငါပေးပြီခဲ့သည်ကဒီမှာဒီမှာရပ်ခဲ့ပါတယ်။ တတိယအချက်ငါတကာကချိုးဖောက်ရှိရမည်။ ငါအမိန့်ချိုးဖောက်ခဲ့ပါဘူး။ တကယ်တော့ကျနော့်တရားသူကြီးကရန်ပုံငွေ၏ပြန်လာတောင်းစာကိုပြသခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်ဂေါပကလိုက်လျောခဲ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့်ငါလိုလိုလားလားသင်သတင်းပို့ ", သင့်အမိန့်ချိုးဖောက်ခဲ့ပါဘူးရှင်းပါတယ်။ တရားသူကြီးစသည်တို့သည်, ယုံကြည်မှုရုပ်သိမ်းရန်အတွက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများကိုပြောင်းလဲရန်ကြိုးစားရန်သင့်အားရရှိသွားတဲ့လျှင်တူညီသောခြေလှမ်းများယူနေကြသည်ထို့ကြောင့်ပြည်တွင်းဥပဒေမထီမဲ့မြင်ထံမှသင်တို့ကာကွယ်ပေးသည်နှင့်ကွတ်ကျွန်းစုဥပဒသင့် hard-ရရှိခဲ့သည်ပိုက်ဆံကာကွယ်ပေးသည်။
ယုံကြည်မှုကို၏ဝင်ငွေဟာလက်ရှိအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ၏အခွန်ပြန်လာအပေါ်တိုက်ရိုက်အစီရင်ခံသည်။ ကဖန်တီးသူ (သို့မဟုတ် grantor) ကိုယုံကြည်မှုအတွင်းရှိဝင်ငွေနှင့်ရန်ပုံငွေများကိုအချို့အကျိုးစီးပွားစောင့်ရှောက်ထားတဲ့အတွက်ယုံကြည်မှုဖြစ်သောတစ်ဦး grantor ယုံကြည်မှုဖြစ်ပါသည်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာအခွန်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် grantor ထံမှသီးခြားသီးခြား taxable entity အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုမထားပေ။ ဒါဟာအရှင်, အ grantor ဖို့ "ဝင်ငွေခွန်ကြားနေ" ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့အခွန်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ကြောင့်သင်တို့၏နာမအတွက်ရန်ပုံငွေများကိုင်ပြီးမှညီမျှသည်။ တစ်ခုပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးရှုထောငျ့ကနေ, သို့သော်, အဲဒါကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ပိုက်ဆံမစောင့်အကြားကွာခြားချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်တဦးတည်းရဲ့ကိုယ်ပိုင် 1040 ပုံစံတစ်ခု "စီးဆင်းမှု-မှတဆင့်" မော်တော်ယာဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအစသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအခွန်ပြန်လာမှအိမ်ခြံမြေအခွန်ဖြတ်တောက်နှင့်အပေါင်ခံအကျိုးစီးပွားဖြတ်တောက်ရှောက်သွားနိုင်ပါတယ်။
"ရုပ်သိမ်းခြင်း" သို့မဟုတ် "ဘယ်သို့?"
တစ်ဦးကရုပ်သိမ်းခြင်းယုံကြည်မှုပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်။ သင်ယုံကြည်မှုအတွက်အကျိုးခံစားခွင့်သို့မဟုတ်တစ်ပြဌာန်းချက်နှင့် ပတ်သက်. ဒုတိယအတှေးရှိပါကသင်သည်သင်၏စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးအပြည့်အဝပြန်လည်ရုတ်သိမ်းမှုယုံကြည်မှုနှင့်အတူစိန်ခေါ်မှုသငျသညျလွတ်လပ်စွာပြောင်းလဲနိုင်လျှင်, သငျသညျတရားစွဲခြင်းနှင့်အနိုင်ရသူသည်သင်၏ဖိနပ်ထဲသို့ခြေလှမ်းများနှင့်လည်းပြောင်းလဲနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ သူတို့ကသူတို့ကိုယ်သူတို့အကျိုးခံစားခွင့်ရှိစေခြင်းနှင့်ရန်ပုံငွေများကိုယုံကြည်စိတ်ချဖို့အပြည့်အဝဝင်ရောက်ခွင့်ရှိနိုင်ပါသည်။
ဘယ်သို့ယုံကြည်မှုခုနှစ်တွင်တစ်ကြိမ်ရေးဆွဲခြင်းနှင့်လက်မှတ်ရေးထိုးကြောင်း, တစ်ခုဖြစ်သည်ပြောင်းလဲသွားတယ်မရနိုင်ပါ။ ယုံကြည်မှုကိုများ၏အကျိုးခံစားခွင့်ကမပွောငျးလဲနိုငျကတည်းကအကျိုးခံစားခွင့်ဆန့်ကျင်နေတဲ့တရားရုံး-အမိန့်တရားသဖြင့်စီရင်သောသူလူတစ်ဦးဖြစ်စေပြောင်းလဲလို့မရပါဘူး။ ပြင်ပကပါတီတရားယုံကြည်မှုကိုများ၏အကျိုးခံစားခွင့်ကိုမပြောင်းနိုင်သောကြောင့်တစ်ဦးဘယ်သို့ယုံကြည်မှုပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအတွက်နေရာတစ်နေရာရှိပါတယ်။ တစ်ခုပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုယုံကြည်မှုများသောအားဖြင့်ယုံကြည်မှုကိုထုတ်လုပ်သူရဲ့မိသားစုများအတွက်ကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသင်အောင်မြင်စွာတရားသူကြီးသူ့ကိုယ်သူဖို့အကျိုးခံစားခွင့်ကိုပြောင်းလဲဖို့မရနိုငျတရားစွဲ။ အဆိုပါဂေါပကအတွက်ခြေလှမ်းနှင့် grantors နှင့်အကျိုးခံစားခွင့်များအကြွေးထဲကနေယုံကြည်မှုပိုင်ဆိုင်မှုကိုကာကွယ်ပေးသည်။
အဆိုပါ ကွတ်ကျွန်းစုယုံကြည်မှု အဖြစ် Semi-ရုပ်သိမ်းခြင်း၏ထင်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါဂေါပကနှင့်ကာကွယ်တော်အားဖြင့်, grantor ယုံကြည်မှုကိုများ၏ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးပြဌာန်းချက်အကျိုးသက်ရောက်စေမသေချာသောအပြောင်းအလဲများတောင်းဆိုနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်သင်ကနှစ်ဦးစလုံးကမ္ဘာရဲ့အကောင်းဆုံးရ။ ယုံကြည်မှုကိုတည်ရှိဆိုတဲ့အချက်ကိုအများပြည်သူစံချိန်တစ်ကိစ္စဖြစ်ပါသည်, သို့သော်အမှန်တကယ်ယုံကြည်မှုသူ့ဟာသူမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီတော့ယုံကြည်မှုကိုစေဆိုအပြောင်းအလဲများကိုသင်နှင့်ဂေါပကအကြားရှိပါတယ်။
ဂေါပကကငါ့ပိုက်ဆံနှင့်အတူပိတ် Run နိုင်ပါသလား?
အဆိုပါဂေါပကလိုင်စင်နှင့်ကပ်လျက်တည်ရှိနေသည်။ လိုင်စင်ရအားဖြင့်ကျနော်တို့ဂေါပကတစ်ဦးလိုင်စင်ရရှိရန်ကျယ်ပြန့်နောက်ခံစစ်ဆေးမှုများမှတဆင့်သွားပြီဆိုလို။ ကပ်လျက်တည်ရှိခြင်းအားဖြင့်ကျနော်တို့ကရန်ပုံငွေတစ်ဦးအာမခံကုမ္ပဏီများကအာမခံထားနေကြသည်ကိုဆိုလိုတာ။ အဆိုပါကွတ်ကျွန်းစုအစိုးရဂေါပကစီမံခန့်ခွဲမှုအောက်တွင်ရန်ပုံငွေ၏ရိုးသားမှုနှင့်သမာဓိရှိအာမခံနိုင်ရန်အတွက်ယူခံရဖို့အချို့သောပြဋ္ဌာန်းချက်များလိုအပ်သည်။ ဥပမာ, ဂေါပကတာဝန်ရှိသည်သောအကောင့်နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောလက်မှတ်ရေးထိုးရှိရမည်။ အဆိုပါ Trustees တစ်ခုမှာသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုတဲ့လိုင်စင်ရရှေ့နေနှင့် / သို့မဟုတ်စာရင်းကိုင်ဖြစ်ပါတယ်။
ဂေါပကအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများယူနေကြသည်ဒါကြောင့်တရားရုံးများ, တာဝန်များကို၏ကှကျအပေါ်လိုလိုလားလားမကြည့်ဘူးနှင့်ကျွန်းအစိုးရပုံမှန်အပေါ် Trustees စာရင်းစစ်ဆေးပါသည်။ ထို့အပြင်ဂေါပကသင်တရားရုံးငွေကိုယူမယ်လို့ဘယ်မှာအနေအထား၌ရှိကြ၏သည်အထိအတွက်ခြေလှမ်းရန်မလိုအပ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်သင်ကအစားအဘယ်အရာကိုများမလဲ သင့်ရဲ့ပိုက်ဆံယူပြီးတရားရုံး၏တစ်ဦးက 100% အခွင့်အလမ်း, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးကို client ရဲ့ပိုက်ဆံခြေလှမ်းခေါ်ဆောင်သွားနှင့်သင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကာကွယ်ပေးရန်ဘယ်တော့မှခဲ့သူတစ်ဦးလိုင်စင်, ကပ်လျက်တည်ရှိဂေါပက?
အဆိုပါပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုယုံကြည်မှုလည်းအိမ်ခြံမြေ-စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းပြဌာန်းချက်ရှိနိုင်ပါသည်။ "ကျနော်တို့နှစ်ဦးစလုံးအရာအားလုံးကလေးတွေသွားသေဆုံးသည့်အခါ" နှင့် "ငါအရာအားလုံးကိုငါ့အိမ်ထောင်ဖက်သွားသေဆုံးသည့်အခါ" ၏ legalese ဗားရှင်းယုံကြည်မှုကိုတည်ဆောက်ပုံ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါသည်။
အဆိုပါကမ်းလွန်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုယုံကြည်မှုကွာရှင်းကိစ္စတွင်နှင့်စီးပွားရေးတရားစွဲမှုအတွက်အလုပ်လုပ်သောအနည်းငယ်ယာဉ်များတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာအစ, အိမ်ခြံမြေအခွန်ကိုရှောင်ရှားကူညီစျေးကြီးစမ်းအခကြေးငွေကိုရှောင်ကြဉ်ပြီးဘိုးဘွားရိပ်သာများအတွက်အများပိုင်အကူအညီအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီဖို့လိုအပ်သုံးစွဲ-Down လိုအပ်ချက်များကိုရှောင်ရှားရန်အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာတာဝန်ယူမှုကုမ္ပဏီ၏ 100% ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဘယ်သို့ကမ်းလွန်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုယုံကြည်မှုမရရှိနိုင်အင်အားအကောင်းဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုဖွဲ့စည်းပုံမှာဖြစ်တဖန်အချိန်နှင့်အချိန်သက်သေပြခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်? ဒါဟာရိုးရှင်းစွာအလုပ်ဖြစ်တယ်။